डेटा संरक्षण र निजी नीति
यदि तपाइँ हाम्रो SarcoidosisUK अनुसन्धानमा भाग लिनुहुन्छ भने, हामी तपाईंको गोपनीयताको सुरक्षा गर्न पूर्णतया प्रतिबद्ध छौं। तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी कसरी उपचार गरिनेछ भनेर बुझ्न, कृपया निम्न नीति पढ्नुहोस्।
यस नीतिको सर्तहरू दानका परिवर्तनकारी गतिविधि र सेवाहरू प्रतिबिम्बित गर्न परिवर्तन हुन सक्छ। कृपया यसलाई समय समयमा समय जाँच गर्नुहोस्। हामीले अन्तिम पटक जून 2018 मा नीति अपडेट गरेका छौं।
यदि तपाइँसँग यस नीतिको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने सम्पर्क गर्नुहोस्: डाटा सुरक्षा अधिकारी (तल नामित), सरकोडोसिस युके,49 ग्रीस स्ट्रीट, W1D 4EG वा ईमेल जानकारी@sarcoidosisuk.org।
यो नीति डेटा संरक्षण अधिनियम द्वारा आईओसी र हेल्पलाइन साझेदारीको सहयोगमा सूचित गरिएको छ। यो सामान्य डेटा संरक्षण विनियम (GDPR) र डेटा संरक्षण अधिनियम अनुसार लेखिएको छ।
हेर्नुहोस् SarcoidosisUK डेटा संरक्षण र गोपनीयता नीति अधिक जानकारी को लागी हामी कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी र डेटा कसरि व्यवहार गर्छन को बारे मा होइन SarcoidosisUK अनुसन्धान संग संलग्न।
यो नीति यसो भन्छ:
'सरकोडोसिसयू यूके रिसर्च'
हामीले अनुसन्धान उद्देश्यका लागि कस्ता सूचनाहरू सङ्कलन गर्दछौं
किन हामी अनुसन्धान प्रयोजनका लागि सूचना संकलन गर्दछौं
हामी कसरी अनुसन्धान उद्देश्यका लागि जानकारी सङ्कलन गर्दछौं
हामी तपाईंको जानकारी कसरी प्रयोग गर्छौं
हामी तपाईंको जानकारी को साथ साझा गर्छौं
हामी तपाईंको जानकारी कसरी सुरक्षित गर्छौं
हामी तपाईंको जानकारी कति लामो राख्छौं
थप जानकारी र सम्पर्कहरू
'सरकोडोसिस यूके रिसर्च' द्वारा हामी के मतलब छ?
सर्वेक्षण र प्रश्नपुस्तकहरू
स्वास्थ्य स्थितिको उपाय र अन्य परामर्श निर्धारण उपकरणहरू
रोगीले अनुभवको उपायबारे जानकारी दिए (PREM)
यो नीति होइन SarcoidosisUK-BLF Sarcoidosis Research Grant Projects under Medical Research मा संलग्न सहभागिता। यी प्रोजेक्टहरू जो पनि अनुसन्धान संस्थानको नीतिको अधीनमा रहेको छ त्यस परियोजना - कृपया उनीहरूलाई थप जानकारीको लागि सीधा सम्पर्क गर्नुहोस्।
यो नीति होइन सर्कोडोसिसका वेबसाइटमा बाह्य लिङ्कहरूबाट पत्ता लगाउने अनुसन्धानमा संलग्न सहभागीहरू, उदाहरणका लागि NHS क्लिनिकल परीक्षणहरू वा युरोपेली फाउण्डेशन फाउण्डेसन।
यदि तपाईं अनिश्चित हुनुहुन्छ र पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ कि यदि तपाइँ सरकोडोसिसयू यूके रिसर्चमा भाग लिइरहनुभएको छ भने कृपया तल राखिएको डेटा सुरक्षा अधिकारीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हामी के जानकारी सङ्कलन गर्छौं?
त्यहाँ जानकारीको दुई मुख्य प्रकारहरू हामी संग्रह गर्न सक्दछौं - व्यक्तिगत र संवेदनशील। कुनै पनि अन्य जानकारी अलग छ SarcoidosisUK डेटा संरक्षण र गोपनीयता नीति। SarcoidosisUK केवल कि विशिष्ट र इच्छित अनुसन्धान उद्देश्यको लागि आवश्यक जानकारी एकत्र गर्नुहोस्।
व्यक्तिगत जानकारी: SarcoidosisUK ले जानकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गर्ने जानकारी सङ्कलन गर्दैन जब सम्म कि जानकारी स्वैच्छिक रूपमा प्रकट भएको छैन। हामीले एकत्रित व्यक्तिगत जानकारीमा तपाईंको नाम, जन्म मिति, ईमेल ठेगाना, आईपी ठेगाना (इन्टरनेट प्रोटोकॉल ठेगाना), पोष्ट ठेगाना वा टेलिफोन नम्बर र निश्चित जनसांख्यिकीय विवरणहरू जस्तै उमेर र नितिमा समावेश हुन सक्दछ।
संवेदनशील जानकारी: हाम्रो अनुसन्धान सञ्चालनमा, हामीले डेटा सुरक्षा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी संकलन गर्न पनि आवश्यक छ जुन तपाईंको स्वास्थ्यको बारेमा विशेष जानकारी हो। जब हामी त्यसो गर्नका लागि स्पष्ट कारण मात्र संवेदनशील जानकारी सङ्कलन गर्नेछौं। यदि तपाईंले एक अनुसन्धान परियोजनामा भाग लिन रोज्नु भएको छ र पछि निर्णय गर्ने छ कि तपाइँ संवेदनशील जानकारी साझा गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो सहभागिता कुनै पनि समयमा समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीको लागि 'तपाईंको अधिकार' हेर्नुहोस्, तल।
हामी किन तपाईंको जानकारी सङ्कलन गर्छौं?
हाम्रो अनुसन्धान सार्ककोडोसिसको बारेमा बढी बुझ्न व्यापक लक्ष्यको साथ विभिन्न कारणहरूका लागि आयोजित गरिएको छ, यो कसरी sarcoidosis रोगहरूलाई असर गर्छ र अन्ततः यो रोगको उपचारको खोजी गर्न सकिन्छ।
व्यक्तिगत: SarcoidosisUK uses the personal information we collect about you to help better administer and further our research programme. SarcoidosisUK or our Trusted Research Partners may need to contact you to discuss your answers or the results of the research.
संवेदनशील: SarcoidosisUK हामी संवेदनशील जानकारी प्रयोग गर्दछौं जुन हामी हाम्रो अनुसन्धानको लागि सङ्कलन गर्छौं र सरकोडोसिसको बारे बढि जान्दछौं र यसले रोगहरूलाई असर गर्दछ। तपाईंले प्रदान गर्नुभएको स्वास्थ्य बारे जानकारी हाम्रो अनुसन्धान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको विस्तृत दायराको जवाफ दिन धेरै उपयोगी हुन सक्छ।
हामी कसरी व्यक्तिगत र संवेदनशील जानकारी सङ्कलन गर्छौं?
तपाईं आफ्नो जानकारी SarcoidosisUK संग साझा गर्दा तपाईं अनलाइन मा अनुसन्धान मा भाग लिनुहुन्छ वा एक पेपर फारम भरेर।
हामी तपाईंको जानकारी कसरी प्रयोग गर्छौं?
हामी तपाईंको व्यक्तिगत र संवेदनशील जानकारी प्रयोग गर्दछौं हाम्रो अनुसन्धान कार्यक्रम।
व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ:
तपाईंले सहभागी अनुसन्धान गर्नुभएकोमा तपाईसँग कुराकानी गर्नुहोस्
तपाईंले सहभागी अनुसन्धान गर्नुभएको परिणामहरू प्रदान गर्नुहोस्
तपाईंसँग छलफल गर्नुभएका शोधका परिणामहरू जुन तपाईले भाग लिनुभएको छ
यदि अनुरोध गरिएको हो भने जानकारी र सल्लाह दिनुहोस्।
संवेदनशील जानकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ:
तपाईंको sarcoidosis को बारे मा अधिक जानकारी प्रदान गर्नुहोस र यो तपाईंलाई कसरि प्रभावित गर्दछ
तपाईंको सरकोडोसिसको बारे थप जानकारीको साथ र तपाइँको तपाईंलाई कसरी प्रभाव पार्दै आफ्नो मेडिकल टीम प्रदान गर्नुहोस्
तपाईंको sarcoidosis को बारे मा अधिक बुझें
sarcoidosis र SarcoidosisUK को बारे मा अधिक बुझें
एक डेटाबेस को भाग को रूप मा राखयो जो विशिष्ट शोध र विकास उद्देश्य को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
SarcoidosisUK ले निम्न कानुनी आधारमा डाटा एकत्रित गर्दछ र प्रक्रिया गर्दछ जुन सामान्य डेटा सुरक्षा विनियम (GDPR) को अनुच्छेद6मा सेट गरिएको छ।
व्यक्तिगत डेटा प्रसोधन गर्ने हाम्रो कानुनी आधार वैध चासो हो।
सहमति: डेटा विषयले एक वा बढी प्रयोजनका लागि आफ्नो व्यक्तिगत डेटा प्रसोधनमा सहमति दिएको छ।
वैध हितहरू: प्रोक्रिडोसिस युकेको वैध हित वा तेस्रो पक्षको वैध हितको लागि प्रशोधन आवश्यक छ जब सम्म कि व्यक्तिगत वैयक्तिक डेटा को संरक्षण गर्न को लागी राम्रो कारण हो जुन ती वैध हितों को ओभरराइड गर्दछ।
हामी तपाईंको जानकारी (व्यक्तिगत र संवेदनशील) सँग कसलाई साझा गर्छौं?
हामी तपाईंको चिकित्सा टोली वा अनुसन्धान साझेदारहरूको साथ जानकारी साझेदारी गर्नु अघि सूचित सहमतिको लागि सोध्दछौं। यसमा तपाईंको बोली सहमति प्रत्यक्ष रूपमा तपाईंको मेडिकल टीममा समावेश गर्दछ।
हामी तपाइँलाई कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गर्न कुनै पनि जानकारी खुलासा गर्नेछौं, तपाईंको पूर्व स्पष्ट अनुमति वा कानून अनुसार आवश्यक पर्दछ।
थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् SarcoidosisUK नीति सुरक्षा.
हामी हाम्रो कानूनी अधिकारहरूको रक्षा गर्न हाम्रो वित्तीय र कानूनी सल्लाहकारहरूको साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा गर्न अधिकार सुरक्षित छौं।
हामी तपाईंको जानकारी कसरी जान्छौं (व्यक्तिगत र संवेदनशील)?
जब हामी तपाईंको जानकारी सङ्कलन गर्दछौं, हामी अनधिकृत पहुँच रोक्न सख्त प्रक्रिया र सुरक्षा सुविधाहरू प्रयोग गर्दछौँ। हामी यो जानकारी सुनिश्चित गर्न को लागी उपयुक्त उपायहरू पनि लिन्छौं:
सुरक्षित, सही र अद्यावधिक राखिएको र
केवल यसको लागि राखिएको उद्देश्यको लागि यसको उद्देश्य उद्देश्यको लागि आवश्यक छ।
तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको रक्षा गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछौं, हामी तपाईलाई पोस्ट गर्ने ईमेल, इमेल वा अन्य माध्यमद्वारा प्रसारणको सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं। तपाईं आफ्नो जोखिममा हुनुहुन्छ।
हामी तपाईंको जानकारी (व्यक्तिगत र संवेदनशील) कति लामो राख्छौं?
हामी नियमित रूपमा समीक्षा गर्दछौं कि हामी तपाईंको जानकारी कति लामो छौँ। हामी कानुनी रूपमा आवश्यक छ कि केही प्रकारका जानकारीहरू हाम्रो वैध दायित्वहरू पूरा गर्न। हामी तपाईंको व्यक्तिगत र संवेदनशील जानकारी हाम्रो प्रणालीमा जबसम्म आवश्यक उद्देश्यको लागि आवश्यक पर्दछ - हामी लामो समयसम्म अध्ययनको अंश बन्नु भएको छ भने यो धेरै वर्ष सम्म हुन सक्छ। यदि तपाइँले हामीलाई सोध्नुभयो भने तपाइँलाई फेरि सम्पर्क गर्नुभएन फेरि हामी अनिश्चितकालको रेकर्ड राख्नेछौं। तपाईंको जानकारी अब आवश्यक छैन जहाँ हामी यसलाई सुरक्षित रूपमा सुरक्षित गर्दछौं।
SarcoidosisUK GDPR को अनुच्छेद5(1) (ई) संग लाइन मा जानकारी दि्छ।
अनुसन्धान साझेदार अस्वीकरण
तपाईंको व्यक्तिगत र संवेदनशील जानकारीको सम्बन्धमा तपाइँसँग निम्न अधिकारहरू छन्।
यदि तपाईं सोर्ससोइडोसिस युके रिसर्च प्रोजेक्टको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ वा कुनै पनि समयमा, तपाईंसँग अधिकार छ:
सहभागी रोक्नुहोस् र तपाईंको जानकारी साझेदारी गर्नुहोस् - पूर्व सूचना वा कारण आवश्यक छैन
SarcoidosisUK कार्यालय (info@sarcoidosisuk.org) बाट सम्पर्क गरेर तपाईंको जानकारी रद्द गर्नुहोस् वा परिमार्जन गर्नुहोस्।
हामीले तपाईंको बारेमा व्यक्तिगत जानकारीको प्रतिलिपिको लागि सोध्नुहोला र हाम्रो कुनै पनि गलत सुधार गर्नका लागि
तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी मेटाउन हामीलाई अनुरोध गर्नुहोस्; तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको हाम्रो प्रक्रियालाई सीमित गर्न, वा तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको हाम्रो प्रक्रियामा वस्तुलाई रोक्न
यदि तपाईं यी अधिकारहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया info@sarcoidosisuk.org लाई इमेल गर्नुहोस्। अनुरोधमा निर्भर गर्दछ, यो2अलग पहिचान कागजातहरूको प्रतिलिपि पठाउन आवश्यक हुन सक्छ जस्तै पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, वा उपयोगिता बिल। पहिलोलाई फोटो पहिचान दिनुहोस् र दोस्रो ठेगाना तपाईको ठेगाना पुष्टि गर्नुहोस्। कृपया हामीलाई तपाईंको सम्पर्कको प्रकृतिको बारेमा जानकारी दिनुहोस्, हामीलाई तपाईंको रेकर्ड पत्ता लगाउन मद्दत पुर्याउनुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईले निम्न कागजातहरूलाई पोस्ट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ: द डाटा प्रोटर अफिस, सर्कोडोसिस युके,49 ग्रीक स्ट्रीट, लन्डन, W1D 4EG।
हामी 30 दिन भित्र प्रतिक्रिया गर्नेछौं, एक पटक हामीले तपाईंको लिखित अनुरोध प्राप्त गर्यौं र तपाईंको पहिचान कागजातहरूको प्रतिलिपिहरू।
हामीले अधिक भन्दा बढी वा manifestly अपूर्ण अनुरोधहरूको लागि प्रशासन शुल्क चार्ज गर्ने अधिकार सुरक्षित छौं।
अन्य सम्बन्धित SarcoidosisUK नीतिहरु
SarcoidosisUK डेटा संरक्षण र गोपनीयता नीति
SarcoidosisUK सूचना मानक नीति
SarcoidosisUK नीति सुरक्षा
SarcoidosisUK नर्स मद्दतलाइन सेवा मानक (गोपनीय र डेटा संरक्षण नीति सहित, नीति सुरक्षा र सूचना मानक नीति सहित)
SarcoidosisUK डेटा संरक्षण अधिकारी
यस नीतिको बारेमा थप जानकारीको लागि कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्:
श्री जैक रिचर्डसन
डेटा संरक्षण नियामक:
तपाईं डेटा सुरक्षाको बारे थप जानकारी र सल्लाह प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा डाटा सुरक्षाको बारेमा चिन्ता रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ:
मद्दतलाइन: 0303 123 1113
यूके बाहिरबाट: +44 1625 545 745